Tsy nirahina afa-tsy ho an'ny ondry very amin'ny taranak'Israely aho - Dinika forum.serasera.org
Tsy nirahina afa-tsy ho an'ny ondry very amin'ny taranak'Israely aho
Fitohizan'ny hafatra : Tsy nirahina afa-tsy ho an'ny ondry very amin'ny taranak'Israely aho
rhaj0 - 07/07/2017 15:12
Matio 15:24 Tsy nirahina afa-tsy ho an'ny ondry very amin'ny taranak'Israely aho
Ary izany no tenin'i Jesosy, tenin'Andrmntra.
rhaj0 - 07/07/2017 15:14
Koa manontania tena daholo rey olona :
1- "Ondry Very" va ianao?
2- "taranak'Israely" va ianao?
RBNIR - 07/07/2017 18:31
Izay mihitsy no tena mission nanirahana an'i Jesosy rhajo!!
Saingy rehefa nankany amin'ny Azy izy dia « Tonga tany amin'ny Azy Izy, fa ny Azy tsy nandray Azy. » (Jaona 1:11)
Ary farany dia nalahelo IZY ka izao no nanao ity fanoharana ity......
« Ary Jesosy namaly, dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe: » (Matio 22:1)
« Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka, izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zananilahy. » (Matio 22:2)
« Ary izy naniraka ny mpanompony hiantso izay efa nasaina mba hankao amin'ny fampakaram-bady; fa tsy nety ho avy ireo. » (Matio 22:3)
« Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe: Lazao amin'ny efa nasaina hoe: Indro, efa voavoatra ny nahandroko; efa voavono ny ombiko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra; koa mankanesa aty amin'ny fampakaram-bady ianareo. » (Matio 22:4)
« Nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sahany, ary ny anankiray ho any amin'ny varony. » (Matio 22:5)
« Ary ny sisa nisambotra ny mpanompony, dia nisetrasetra taminy ka namono azy. » (Matio 22:6)
« Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. » (Matio 22:7)
« Dia hoy izy tamin'ny mpanompony: Efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa ny efa nasaina no tsy miendrika. » (Matio 22:8)
« Koa mankanesa ianareo any amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo, dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady. » (Matio 22:9)
« Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy, na ny tsara; ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. » (Matio 22:10)
« Ary nony efa niditra ny mpanjaka hizaha ny mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. » (Matio 22:11)
Ireo nasaina fa tsy tonga dia tsy iza fa ireo Jiosy izay antony nahatongavany,
Koa satria ilay nahandro efa voavotra (tsy misy mpihinana nefa efa nisahiranana : nanasa vahiny tsy tonga) dia izay no antony niantsoana ireo teny amin'ny sampanan-dalana dia tsy iza fa ireo hafa firenena indray kosa....
Nanomboka teo no nolavina ny Jiosy fa ny jentilisa indray kosa no noraisina ary amin'izao fotoana iainantsika izao no atao hoe andron'ny jentilisa,
Any aoriana any anefa dia mbola horaisina indray ireo jiosy ireo......(any amin'ny ora farany indrindra no hisy an'izany)
RBNIR - 07/07/2017 18:32
rhaj0 - 07/07/2017 20:01
Ka tena diso mihintsy izany ny "famakiko BAiboly" raha izany. Izaho mihevitra hoe, "izay voasoratra dia voasoratra"... @ dikany hoe, izay voasoratra t@ toko anankiray, dia efa vita matavy carré, fa tsy hoe, @ toko ao aoriandriana ao, dia niova ny resaka sy ny revy, ary dia tsy mitombona intsony ilay taloha.
Ka io izany, hozy i RBNIR, dia ohatra mazavabe eto, fa
- @ Matio 15:24, dia voasoratra fa tsisy AFA-TSY "ondry very amin'ny taranak'Israely", ireo IHANY no nanirahana an'i Jesosy
- fa any @ Matio 22 sns.. any kosa anefa, dia TSY izay INTSONY no fandehany, satria nisy tantara nandaginina teo @ ireo "ondry very amin'ny taranak'Israely" tao.
Ka izay izany ilay izy???
RBNIR - 08/07/2017 05:03
Ka tena diso mihintsy izany ny "famakiko BAiboly" raha izany. Izaho mihevitra hoe, "izay voasoratra dia voasoratra"... @ dikany hoe, izay voasoratra t@ toko anankiray, dia efa vita matavy carré, fa tsy hoe, @ toko ao aoriandriana ao, dia niova ny sy ny revy, ary dia tsy mitombona intsony ilay taloha.
mila mianatra isika rhajo a! ary raha ianatra ihany dia aleo ny fampianaran'ny apostoly no ianarana
ny atao hoe apostoly dia olona iray izay nofidin'i Jesosy mivantana sy nampianariny mivantana ihany koa tsy misy mpanelanelana...
Ireny apostoly ireny no ampianariny ny zava-miafina rehetra, ampianariny an'ireo teny toa mifanohitra satria raha ny marina dia tsy misy mifanohitra izany ao amin'ny baiboly namana....
Miharena - 08/07/2017 11:09
Raha Gasy Rhaj0 dia taranak'Israely.
Ary taranaka very satria ilay taranaka heverina ho fanasin'ny tany indray no tsy mivavaka.
Dia ianao indrindra no nahatongavan'i Jesoa!!
rhaj0 - 09/07/2017 00:02
RBNIR aleo ny fampianaran'ny apostoly no ianarana
Izany hoe, hozy ve iRBNIR hoe, aleo TSY mamaky Baiboly fa ny "fampianaran'ny apostoly no ianarana", satria "izay voasoratra t@ toko (sasany ao anaty Baiboly) dia tsy mitombona intsony"??
Izaho aloha tsy-hi-contredire anao ny @ hanariana any ny Baiboly
Fa raha ny Apostoly-nao.. ry Tsaratsara sy Herinirna ve??? tena ariako any koa eee..
Miharena Raha Gasy Rhaj0 dia taranak'Israely.
Tsy menatra ary tsy mipi-maso mihintsy ry Miharena manao affirmation gratohita toa itony. Raha eny @ alitara moa ianao mitory an'itony, dia hiankohoka tokoany angamba ny eraky ny Fiangonana. Fa eto re ry Miharena mba mitsikarokaroka mampiasa coco ny olona aa..
Efa noresahina teto ny fiaviantsika Malagasy
Tato ho ato dia maromaro ihany ny vokatry ny fikarohana ny @ niavin'ny RazanTSIKA nataon'ny Siantista. Ireo misy santionany tsikaritro:
les ancêtres des malgaches seraient les Banjar, un peuple qui vit dans le sud-est de l'île de Bornéo.
seeds of Austronesian origin from the 8th and 10th centuries CE were concentrated on Madagascar
Efa ela ihany no nanombatombana ny (siantista) maro fa avy any Azia atsimo atsinanana ny razambentsika, fa io izany dia voaporofon'ny (1) ADN-ntsika, ary koa (2) ny zavatra novokarina tao Dago izany.
Ny niavian'ny RazanTSIKA izany dia avy tany Azia Atsimo Atsinanana. Fa mazava ho azy, fa mivezivezy koa ny olona h@ izay nitoeran'ireo Razantsika teto Dago izay, ary dia nifangaro t@ ireo olona nivezivezy ireo ny mponina.
- ohatra ireo Arabo (na koa Jiosy) araka ny notaterin'i Flacourt azy ohatra
- na koa ny Frantsay atsy Sainte-Marie, izay nipetraka tao koa efa ho 500 taona lasa izay (ohatra raha ny tombatombako eto, dia Itpkl Sylla dia malagasy tokoany, fa io hitanao fa toa Frantsay io)
Havoitrako eto @ "fivavahana sy finoana" ity resaka ity, azony be loatra ireo mpandrebireby (sy voarebireby), ka dia tsorina fa MANDAINGA mihintsy rahefa miresaka ny @ "niavian'ny razanTSIKA", ary izany dia noho ny antony finoana/fivavahana maizimaizina, ankoatry ny fanararaotana sy fanambakana ataony vokatr'io fitaka sy lainga ataony io.
Hainao ihany no tiako lazaina:
- Hebreo hono ny gasy eee..
- Jiosy indray manko eee...
- Jentilisa (avy any Moyen-orient) hono, ary taranaky ny foko #13
- satria mantsy, raha izay lojika izay, dia ny Frantsay koa izany afaka manao fitakiana (revendication) fa Frantsay i Madagasikara.
Miharena - 10/07/2017 06:07
O r'ingahy Rhaj0 a!
Misy tantara fantatsika Malagasy izay ny Frantsay no manpianatra antsika azy.
Misy kosa tantara izay ny Razantsika Malagasy no mitantara azy.
Ity faharoa no tokony hohenoina sy fakafakaina tsara fa ireo voalohany dia misy zavatra tsy ampy.
Raha miteny isika ohatra hoe maninona no manao sorona eny an-tampon-tendrombohitra ny Ntaolo efa taloha ben'ny nidiran'ny Baiboly voadika amin'ny teny Grika teto, dia misy zava-miafina tsy fantatry ny Frantsay sy izay mpandinika tamin'izany fotoan'andro izany.
Hatramin'izao dia misy ny mijoro fa Jiosy izy satria fantany tsara ny fomba Jiosy rehetra ary fantany aza hoe Iza no ifandraisany dia ilay Mpahary.
Afaka manontany ireny Mpitankazomanga ireny ianao.
Ny olanao manko raha dinihiko dia efa voazanaka tanteraka hatrany amin'ny tsinaimaintinao dia tsy mahay afa-tsy ny manamarina ny fanadihadian'ny vahiny heverinao fa mahay noho ny Malagasy.
RBNIR - 10/07/2017 08:10
Vakio ity teny ity...« Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy, dia tsy manana an Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana, dia izy no manana ny Ray sy ny Zanaka. » (2 Jaona 9)
Aleo taritin'ny apostoly fa ireny no azo antoka fa tena manana ny Ray sy ny Zanaka....
rhaj0 - 10/07/2017 19:53
Miharena Misy kosa tantara izay ny Razantsika Malagasy no mitantara azy
ka inona azany no "tantara" avy @ "Razantsika Malagasy" milaza, araka ny fiazan'i Miharena fa "taranak'Israely" ny Gasy ee...
Ny sorona eny an-tampon-tendrombohitra angaha moa dia ny taranak'Israely ihany no nanao izany, fa samy "natahotra" ny "ao ambony ao" daholo ny sivilizasiona isan'isany, dia mba eny an-tampony eny izany no akaikikaikin'ilay "ivavahana", izay inoana fa mandehandeha ao @ rahona ao.
RBNIR Aleo taritin'ny apostoly fa ireny no azo antoka fa tena manana ny Ray sy ny Zanaka....
Ahitsiko kely azanny ee.. @ RBNIR, dia :
aleo ny tenabe TSY mamaky Baiboly fa ny "fampianaran'ny apostoly izay namaky Baiboly no arahina dia ianarana", satria "izay voasoratra t@ toko (sasany ao anaty Baiboly) dia tsy mitombona intsony"; ka i Apostaoly tsinona no mahatakatra... satria zareo manana fifandraisana hafahafa @ Andrmntra
Miharena - 12/07/2017 08:10
Ny Malagasy aloha no resahako eto hoe manana anjara fifandraisana amin'ny Mpahary.
Maro ireo olona izay hitantsika fa manana izany fifandraisana izany ary afaka manao asa lehibe izay tsy izy intsony no manana saina hitondra izany asa izany fa ny Fanahy ao ambon mibaiko azy.
Ho fampahatsiahivana dia ireto avy no zavanisy:
- tamin'ny andro nisian'ny fanenjehana ny Maritiora tamin'ny andron-dRanavalona Reniny dia nisy fahagagana maro nitranga teny amin'ny rahon'ny lanitra. Azo vakiana ny momba ny tantaran'ny Maritiora moiasika ireo kalesy afo nitondra ny fanahin'ny maritiora; Ny Baiboly nodorana nefa tsy levona; Ny fandoroana ny maritiora nefa tsy nahatsiarovan'izy ireo fangirifiriana...
- tamin'ny fangotrahan'ny ady lehibe dia nisy indray ny olona nofohazina hiasa toa an-dRainisoalambo, Dadatoa Rakotozandry, Nenilava;
- amin'izao isika miteny izao dia mbola betsaka ireo velona no miaraka amin'ny Tompo mitory ny teny avy any Ambony.
Misy marika izay hahafahana mamantatra hoe nomena zo ireo olona ireo hahafantatra ny zava-miafina momba an'Andriamanitra Jehovah sy Jesoa Krsity ary ireo Mpaminany nifandimby.
Ao ohatra ny nampanaovana an'i Nenilava ny fitafian'i Arona Mpisoronabe izay iaraha-mahalala fa rahalahin'i Mosesy.
Ireo olona nahazo iraka dia mazava fa nomena fanomezam-pahasoavana hanatontosa izany iraka izany ary avy any ambony hatrany no Hery hahafahan'izy ireo manatontosa izany satria fantatra fa sarotra ny asa noho ny faharatsiana miha-mahazo vahana andro aman'alina noho ny fifampitondran'ny olona sy ny fitadiavany hery miafina avy amin;Ilay Ratsy hanatontosany ny sitrapony mambotry ny namany.
ravonjison - 12/07/2017 14:57
Volalazan´i Miharena teo :
"....Misy tantara fantatsika Malagasy izay ny Frantsay no manpianatra antsika azy.
Ity faharoa no tokony hohenoina sy fakafakaina tsara fa ireo voalohany dia misy zavatra tsy ampy...."
Tena diso fipetraka aloha ny voalazanao e. Tsy hoe gasy no nitantara azy na afrikana no nitantarara azydia izay no mahamarina ny tantara iray. Ny mahamarina ny tantara iray dia izy arahina porofo mazava. Ohatara hoe ilay ADN voalazan´i rhaJO etsy ambony. Rehefa voaprofo araka ny ADN ny fiavian´ny razantsika dia izay izany , fa tsy miankina mihitsy amin´ny hoe frantsay na malagasy no nilaza ilay izy.....Eto izany tsy misy resaka hoe vahiny mahay noho malagasy na malagasy mahay noho ny vahiny sns ...araka ny eritreritrao.
Voalazan´i Miharena teo :
"...Ho fampahatsiahivana dia ireto avy no zavanisy:
- tamin'ny andro nisian'ny fanenjehana ny Maritiora tamin'ny andron-dRanavalona Reniny dia nisy fahagagana maro nitranga teny amin'ny rahon'ny lanitra. Azo vakiana ny momba ny tantaran'ny Maritiora moiasika ireo kalesy afo nitondra ny fanahin'ny maritiora; Ny Baiboly nodorana nefa tsy levona; Ny fandoroana ny maritiora nefa tsy nahatsiarovan'izy ireo fangirifiriana..."
Raha izaho ianao dia sokafana tsara ny saina dia apetraho amin´ny tany ny tongotra, fa toa mitsingevaheva no fahitako anao.
Tsy nisy fahagagana teny amin´ny rahona izany, tsy nisy kalesy afo izany koa...fa revingadran´ny mpino fotsiny izany. Zavatra tsy mitombina toy izany ve ho entinao hiadiana hevitra eto.... Mba tongava saina re e.
rhaj0 - 12/07/2017 15:25
Miharena tamin'ny andro nisian'ny fanenjehana ny Maritiora tamin'ny andron-dRanavalona Reniny dia nisy fahagagana maro nitranga teny amin'ny rahon'ny lanitra.
ravonjison revingadran´ny mpino fotsiny izany..
Hono ho'a ry Miharena. mba hainao ve hoe firy ny maripana ao ambony rahona ao?? Mba hainao ve hoe, inona io "rahona" io (na "rahon'ny lanitra" lazainao io)???
Ngo dia mangatsiaka ihany ao ambony ao, ka raha toa ka miery ao foana ry Jesosy, mety hivaingana h@ ranon-delony an...
Tsihoarandaza - 12/07/2017 20:33
Misy olona mahatalanjona ato ,ny mission-ny ato anatin'ity Vondrona ity dia tokana.....Hanenjika an'i Jesosy Kristy Ilay Famantarana no/holavina!!!! ahodikodiny @ tsy finoany eo ny Kristianina, fanakianana ny baiboly no ataony betsaka ato( maniratsira izay masina),entiny eto ilay SORATRA MASINA( ao amin'ny Filazantsara dia avy eo tsikerainy).maninona ary raha avoaka na atonta ho an'ny daholo be,izay heverinareo ho izy eh dia ho hita eo.hiarahana midinika (Avoahy nenareo marina fa aza ny Baiboly/Avelao ny baiboly ho an'ny Kristianina fa tsy natao ho anareo le izy ary efa nolavinareo hatrany amboalahany sy novonoinareo Ilay Teny tonga nofo!!!!Porofo, porofo? porofo?be dia be ny zavatra tsy ho vitantsika olombelona tsotra ny hanamporofo azy (Na jiosy ianao na malagasy na amerikana), tsy misy finoana akory, Abrahama, Noa,Elia : Tsy nanana fitaovana raitra sy ary fomba toy ny ankehitriny ireo Mpanompon' YHWH fa nanana finoana be dia be.Hatramin’io fotoana tao anatin’ny andron’ny Testamenta Vaovao io dia tamin’ny Jiosy ihany no nitoriana ny filazantsara, niaraka tamin’ny olona vitsivitsy manokana. Na i Jesoa aza dia tsy nitory afa-tsy tamin’ireo “ondry very amin’ny taranak’Isiraely” ary nandidy ny Apôstôliny mba hanao torak’izany koa (jereo ny Matio 10:5–6). Kanefa nilaza tamin’ireo mpianany ny Mpamonjy fa aorian’ny hahatongavan’ny Fanahy Masina eo amin’izy ireo dia hitory ny filazantsara “hatramin’ ny faran’ ny tany” izy ireo (Asan’ny Apostoly 1:8). Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 10 isika dia mamaky momba ny fiovana lehibe teo amin’ny fomba fiasan’ny Fiangonana izay hanampy amin’ny fanatanterahana izany.
Vakio ny Asan’ny Apostoly 10:1–2 hitadiavana ny mombamomba ny Jentilisa iray nantsoina hoe Kornelio.
Kapiteny i Kornelio. Ny kapiteny dia “manamboninahitra tao amin’ny tafika Romana, nibaiko miaramila 50 ka hatramin’ny 100. Ny holafitra toy izany dia manome ny iray ampahenin’ny legiona Romana” (Torolalana ho an’ny Soratra Masina, “Kapiteny,” scriptures.lds.org).
Araka fomba fanao tao amin’ny Fiangonana tamin’izany fotoana izany, i Kornelio, amin’ny maha-Jentilisa azy, dia tsy nahazo niditra ho mpikamban’ny Fiangonan’i Kristy raha tsy niova finoana nanaraka ny fiavavahana Jiosy aloha. Na dia tsy nahazo niditra ho mpikamban’ny Fiangonana aza i Kornelio noho ny naha-Jentilisa azy dia ahoana no nanehoany ny finoany an’Andriamanitra? HEBREO 11: 7 .de tsimpony indray izay teny manohitohina ny fanahy ao anatinareo @io voalaza io fa adihevitra no hatao eto.
Tsihoarandaza - 12/07/2017 20:42
…, ary hisy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay hahatonga mangingina sain-diso* mahavery ary handà ny Tompo Izay nividy azy aza ka hahatonga fahaverezana tampoka ho amin’ny tenany. [* Na: fitokoana] » 2 Petera 2:1
« Izaho dia manambara amin’izay rehetra mandre ny tenin’ny faminaniana amin’ity boky ity: Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin’ity boky ity ho azy; » Apokalypsy 22:18
Vakina fotsiny ato ireo olona ireo!!!!
rhaj0 - 12/07/2017 20:53
Tsihoarandaza Misy olona mahatalanjona ato ,ny mission-ny ato anatin'ity Vondrona ity dia tokana.....Hanenjika an'i Jesosy Kristy
Raha izaho aloha no tondroinao ho "olona mahatalanjona" dia ... misapOritra aho ee ..
Fa izaho re ry Tsihoarandaza dia Atheista aaa... Fa mba mamahabaha ny Baiboly fotsiny, dia mifanakalo @ namana eto e... Raha raisinao ho "devoly" ny Atheista, dia .. aza mamaky akory izay soratako izany e... Soa fa ny namana hafa izay Kristiana eto TSY @ izany intsony, satria .. efa fantatra fa na i Mandela na i Einstein dia Atheista.
Dia izany "manenjika Jesosy" izany koa anie ry Tsihoarandaza..
f'angaha i Jesosy mitsoaka rey olona aa??
Tsihoarandaza - 12/07/2017 21:03
Ok Zoky ah!!!safidinao iny dia hajaiko "Atheista"!!!!Hajaina ianao @ maha- Atheiste anao izay, de zay mihitsy ve no fomba fiady hoe tsongoina indray ny teny hoe "manenjika Jesosy" dia henahenaina @ iny eo indray ilay olona. Saika nampihomehy ihany saingy .....Mankasitraka Zoky ah!!! Zay vao azoko
Tsihoarandaza - 12/07/2017 21:17
Fa maninona kosa ary nyAthéiste no natao an'zany? Mendrika azireo ve izany?
tokony izay tsy nanota no nampihatra ny habibiana mahatsiravina toy izany
fa samy efa nanota ihany izy rehetra, ka tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra, fa hamarininy maimaim-poana amin'ny fahasoavany noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesoa.
rhaj0 - 12/07/2017 23:02
Esy e ry Tsihoarandaza.. sirika be ee...
Tena rangidrangitra tao i Tsihoarandaza, fa nataoko naninona naninona hono ny reviny tao, koa rahefa nahita ny famaritana ny Atheista ranamana, dia tena voasarika ny sainy, ary dia ao @ imazination-ny ao, dia tena mba tiany riatana amiko koa ny toatoa ny hoe, "arrachement de la langue, ... dépouilla de tous vêtements, fors sa chemise; on lui mit hart au cou, et suspendit aux épaules ...", fa nikentrona ihany ilay coco-n'i Tsihoarandaza ee... ary dia mba ampadio ny sainy (maloto) dia nopasohan-draTsihoarandaza ny formule mazika :
" ny voninahitr'Andriamanitra, fa hamarininy maimaim-poana amin'ny fahasoavany noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesoa".
Inona no hidiran'i Jesoa @ eritreritrao maloto ao ry Tsihoarandaza???
Sa diso aho???